B.P. Koirala : Sanjaal Ganthan
Biography of Devi Prasad Upreti
April 22, 2013 by rumblefish · LeaveaCommentFiled under: Biography of Nepali People (Source: nai.com.np/contents.php?id=211)
आधुनिकयुगका दानबीर कर्ण
अथवा देवीप्रसाद उप्रेती
मेरा दाजु सीके प्रसाईले लेखेको एउटा डायरी मैले पढेको थिएँ ”बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टर्राई, पुष्पलाल, बालचन्द्र शर्मा, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, पबहादुर मानवर्,र् ईश्वर बरालआदि जबजब दार्जीलिङ जान्थे उनीहरू देवीप्रसाद उप्रेतीकै घरमा बस्थे ।” किनभने उप्रेतीका घरमा सित्तैमा खानबस्न पाइन्थ्यो । यही प्रयोजनका लागि उप्रेतीले दार्जिलिङमा एउटा घर किनेका थिए । त्यही घरमा राखेर पनि यिनले धेरैलाई पढाए ।
उप्रेती सानैदेखि गरिवको हीत गर्थे । गाउँका गरिबलाई यी आफ्नो भात, तिहुन, तरकारी बाँडेर पनि दिन्थे । यसो गर्दा यिनले थुप्रैपल्ट आफ्ना आमाबाबुको कुर्टाई खाए । किनभने यी आफ्नो घरको धन बाँढेर गल्दैन थिए । वास्तवमा सानैदेखि यी दानी थिए । त्यसैले यी पर्ूवाञ्चलमा आदरणीय व्यक्तिका रूपमा सम्मानित भए । तर यिनका जिल्ला र अञ्चलका कुनै पनि प्रशासकले यिनको घर देखनन् । यिनले पनि कुनै सरकारी मान्छेको घरमा गएर पानी खाएनन् । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटादेखि जनकवि गोकुल जोशीसम्मले यिनलाई चिने । जोशीलाई आर्थिक टेकोले अड्याउने पनि उप्रेती नै थिए ।
उप्रेती आधुनिक युगका कर्ण थिए । त्यसैले यिनलाई सूर्यबहादुर थापादेखि खड्गप्रसाद ओलीसम्मले प्रेरक माने । अनि मोदनाथ प्रश्रतिदेखि गोविन्द भट्टसम्मले यिनको आदर्शवाद लेखे । लेख्नेक्रममा यिनको उचाईको श्यामप्रसाद शर्मादेखि तारानाथ शर्मासम्मले पनि वर्णन गरे । यिनलाई जतिले सङ्गत गरे महान मानेर नै यिनको पछि लागे ।
मेची र कोशी अञ्चलमा मात्र २९ वटा स्कुल बनाउने उप्रेती नै थिए । यिनको एकलो मन, दान र त्यागले त्यो भेक नै शिक्षित ठाउँका रूपमा परिचित भयो ।
शिक्षामा उप्रेतीको झुकाव थियो,तर यिनले धेरै पढेनन् । यिनले काठमाडौँको रानीपोखरी स्रेस्ता पाठशालाबाट निजामती प्रथम परीक्षा मात्र उत्तीर्ण गरे ।
२००७ सालको छेकामा नै चार लाख रुपियाँ यिनले त्यहाँका स्कुललाई चन्दा दिए । अनि फेरि यिनले आठ सय चौवन्न विघा झापाको जग्गा पनि स्कुललाई नै दान दिए । त्यस्तै तेह्रथुमको तीन सय उन्नाईस रोपनी जग्गा पनि स्कुललाई दान दिने यी त्यस ठाउँका कर्ण थिए । यिनले पढ्छु भन्नेलाई पैसा पनि नगदै दिन्थे । उनले दिएको नगद र जिन्सी फेरि फिर्ता लिँदैनथे ।
धर्मकर्ममा उप्रेतीको सानैदेखिको रुचि थियो । यी चुरोटबिडी, जाँड, रक्सी र मासु पनि खाँदैन थिए । यी भन्थे ‘मरेको भूत खानुहुँदैन’ । धैर्यशाली व्यक्तित्वले कुँदिएका उप्रेती बोल्दा थोरै बोल्थे तर कानून जस्तै पक्का कुरा बोल्थे ।
शिक्षाविकासका लागि उप्रेती निरन्तर खटे । खास गरेर असहाय र निर्धाको सेवामा यिनले जीवन दिए । यी तन्नमसँग पनि मधुर स्वरमा बोल्थे र उनीहरूलाई लेख्न सिकाउँदा पनि राम्रा अक्षर कुँदेर लेख्तै सिकाउँथे । अक्षर यिनको छापा नै हुन्थ्यो । बाचुन्जेल यिनले बाँसको कलमले मात्र लेखे ।
१९९९ देखि २००७ सालसम्म उप्रेती निरन्तर शिक्षाविकासमा भूमिगत रूपमा लागे । पूर्णबहादुर मानव यिनका सक्रिय मित्र थिए । पछि महानन्द सापकोटाको रायले यिनले सात सालमा र्सवप्रथम झापा जिल्लामा दस गाउँ पञ्चायत खोले अनि यिनैले त्यहाँ प्राथमिक विद्यालयको सुरुवात गरे ।
सात सालको क्रान्तिमा झापामा विचल्लीमा परेका दस हजार व्यक्तिलाई १६५० विघा जग्गा बाँड्ने उप्रेती नै मात्र एक जना थिए । उनीहरूका लागि यिनैले ३३० घर पनि बनाइ दिएका थिए ।
तेह्रथुम जिल्लाको पोखरीमा उप्रेतीेले अर्को स्कुल बनाए । शिक्षा र प्रगतिविरोधी तत्त्वले त्यो स्कुल दुईपटक जलाइ दिए । तर यी निराश भएनन् । उनले फेरि त्यहीँ अर्को स्कुल बनाए । सायद पुर्वाञ्चलको पहाडी इलाकामा त्यति ठूलो विद्यालय भवन अन्त छैन । काठमाडौँको पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस जत्रै पहाडमा स्कुल भवन बनाउने उप्रेती नै एक जना थिए ।
उप्रेती त्यति बेला स्कुल खोल्न तम्से जब शिक्षक पाइँदैनथे । उनले भारतबाट शिक्षक ल्याए । तर विद्यार्थी स्कुल आउन मान्दैनथे । विद्यार्थीलाई प्रतिदिन मिर्ठाई बाँडेर पल्काउँदै स्कुल पढाउने यीनै थिए । निश्शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने यी साँचो गुरुबाबु थिए । सम्पूर्ण शिक्षकको तलब यी आफैले २०२९ सालसम्म बाँडे । तर जब नयाँ शिक्षा लाग्यो तब स्कुलको सम्पूर्ण आयस्तामा कमिशनको खेल सुरु हुन थाल्यो । किनभने नयाँ शिक्षा योजनाले यिनका सबै स्कुलहरू सरकारी भए । यिनले थापेका २९ वटा स्कुलमा यिनैको नाउँ प्रशासनद्वारा कालो मसीले पोतियो । यसपछि यिनको शिरमा ओझेल मात्र पर्न थाल्यो ।
नेपालीहरू शतप्रतिशत साक्षर हुनुपर्छ भन्ने उप्रेतीको तीव्र इच्छा हुन्थ्यो । यिनले युवा पुस्तालाई रोजगारमूलक सीपको शिक्षा दिलाउने प्रयत्न गर्थे । तर पञ्चायती प्रशासनले यिनको गला निमोठ्थ्यो । तर यी हार्दैन थिए । त्रिभुवनले यिनलाई चिनेका थिए । अनि राजा महेन्द्रदेखि वीरेन्द्रसम्मले पनि यिनको रहस्य बुझेका थिए । किनभने यी तीव्र दानी थिए । तर राज्यस्तरबाट यिनले केही पनि लिएनन् । किनभने यी दिन जन्मेका थिए । तर यिनलाई आफ्नै श्रीमती र छोराछोरीले पनि चिनेनन् । यी बाँचुन्जेल आफ्ना घरबाट ‘नजीकका तीर्थ हेला’ भए ।
उप्रेती समाजका महान् चिन्तक थिए । यी हरेक पल अर्काको मात्र हित गर्थे । यी नेपाली समाजको चोखो र सत्य सेवा गर्थे । यी आफ्नो र्सवस्व दिएर पनि मान्छे रिझाउँथे । तर नेपालमा छक्कापञ्जा खेल्ने व्यक्ति धेरै निक्ले । प्रायः समाज माराहरूले नै ठूलाठूला नाउँका समाजसेवी संस्थाको आड पाए । यस्ता विडम्बनाबाट उप्रेती छक्क परे । तर उनी आफ्नो पवित्र काम गर्दै रहे । उनी समाजसेवामा नै दुधकोसी, सुनकोसी अथवा सप्तकोसी जस्तै अविरल बग्दैरहे ।
उप्रेतीको व्यक्तिगत जीवनचाहिं नदीको बालुवाझै अरट्ठ परेको थियो । यिनले चार जनासँग बिहे गरे । आठ छोरा र चार छोरी जन्माए । अनि यी जीवनको अन्त्यतिर प्रायः एक्लै बसे । यिनको जीवनमा ‘बाह्र छोरा तेह्र नाति बूढाको धोक्रो काँधैमाथि’ भन्ने लोकोक्तिले निक्कै साथ दियो ।
तेह्रथुममा जन्मेका देवीप्रसाद उप्रेतीले नेपाललाई नै धेरै दिए । उनले धन, मन र एउटा युग पनि नेपालीलाई नै दिए । दिदादिदै यी विरामी भए । अनि उपचारकै क्रममा काठमाडौंमा यी स्वर्गीय भए । उनी नेपाल र नेपालीको हीत गर्न ८० वर्षर ७० दिन बाँचे । उप्रेतीकै इच्छाले यिनलाई झापाको आफ्नै घर लगियो । यसैक्रममा २०४९ साल असार ११ गते साँझ यिनको भौतिकचोला रात्रिबसको छतमा राखियो । अनि यिनको चोला रूँगेर यिनका जेठा छोरा इन्जिनियर मित्र उप्रेती र भतिजा प्रा.डा.रामप्रसाद उप्रेतीले त्यस बसको छतमा नै एउटा रात कटाए । बिहाको सूर्योदयसँगै बस झापाको घैलाडुब्बा अर्थात् उप्रेती निवास पुग्यो । त्यति बेलासम्ममा त्यहाँ जनसागर उर्लिसकेको
The 37th Prime Minister of Nepal Khila Raj Regmi (Biography)
Biography of Seturam Pradhan – Modern Songs Singer
Biography of Nepali Writer Banira Giri (With2HQ Photos)
Motiram Bhatta – Factual Biography
Biography of Narayan Gopal
Biography of Ghataraj Bhattarai
Biography of Yadav Prasad Panta
Biography of Natikaji Shrestha – A man who dedicated his life to modern Nepali music
Originally posted 2010-12-30 19:55:49. Tags: auto biography, B.P. Koirala, biography, c k prasain, devi prasad upreti, devi prasad uprety biography, devi upreti biography, devi upreti darjeeling, ganeshman singh, gokul joshi, ishwar baral, krishna prasad bhattarai, laxmi prasad devkota, modnath prashrit, Nepal, nepali historical people devi prasad upreti, Nepali People, nepali people biography, pab bahadur manwar, purna bahadur manab, pushpalal acharya, work done by devi prasad upreti List Of Some Popular Writers Of Nepal
Originally posted 2010-12-30 19:55:49. Tags: auto biography, B.P. Koirala, biography, c k prasain, devi prasad upreti, devi prasad uprety biography, devi upreti biography, devi upreti darjeeling, ganeshman singh, gokul joshi, ishwar baral, krishna prasad bhattarai, laxmi prasad devkota, modnath prashrit, Nepal, nepali historical people devi prasad upreti, Nepali People, nepali people biography, pab bahadur manwar, purna bahadur manab, pushpalal acharya, work done by devi prasad upreti User:
Pooja Lama – Another Nepali Actress In Sex Scandal Video Release - 364,549 viewsFree Online E Book Collections Of Paulo Coelho – Read /Download - 89,747 views100 Plus Best Mehendi Henna Design Pictures For Wedding or As A Temporary Tattoo - 58,235 viewsNepali MP3s - 32,193 viewsNamrata Shrestha – The Nepali Actress In Scandal - 29,644 viewsNepali Movie – Sano Sansar – Watch Online [Full Length] - 27,677 viewsGuitar Tabs - 25,245 viewsLyrics – COD Band – Behoshi - 18,703 viewsNepali Joke 19 – Nepali Girlfriend Wears Moms Mini Skirt - 17,894 viewsNepali Joke 20 – Alchhi Nepali Haru - 17,855 viewsLyrics – Aastha – Antim Maya - 16,947 viewsNepali Remix - 16,565 viewsBar Girls of Kathmandu – By Sudeshna Sarkar - 15,747 viewsWhat is seen at “Sex Dance Bar” in Kathmandu - 15,462 viewsCommunity Problem – Teenaged Girls Strip Every Night At Kathmandu Dance Bars - 15,266 viewsHistorical Pictures Of Nepal  - 13,171 viewsSome Nepali Actress Pictures - 13,162 viewsList of Nepali Surnames (C-J) - 12,964 viewsVijaya Dashami (Dashain) and Deepawali (Tihar) Ecards For Free - 11,987 viewsList Of Nepali Surnames (S-Z) - 10,984 views